Izixhobo ze-4 zokwenza eyakho typography | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ezona zixhobo zibalaseleyo zokwenza eyakho typography
Yenza eyakho indawo yokubhalela unokuba njalo uphawu lokuzazisa olwahlula kwabanye kwaye kweli lizwe loyilo kunye nobugcisa yinto ephantse yabaluleka ukuqaqambisa. Ngaphandle kwento yokuba baninzi ngakumbi abayili abazibolekayo ukwenza iifonti ukuzama ukufumana imali encinci okanye nokonwaba ngokwakho.
Le nkqubo iye yaphuculwa ngenxa Ukungena kwezixhobo ezitsha kwintengiso eyenza kube lula ukwenza iifonti zazo zonke iintlobo zezitayile. Apha ngezantsi uyakufumana ezona zixhobo zibalaseleyo zokwenza eyakho typography ngezixhobo ezintle zokuhlela.
Inkqubo ngokwayo yokwenza ifonti entsha inzima kakhulu, kuba iitalente zakho zobugcisa zingena apha. Imilo yoonobumba iyatsalwa okanye ihlelwe, idatha iyangeniswa ukuba umthombo wakho usebenza ngokuchanekileyo Kuwo onke amaqonga, uyangqina ukuba nokuyiprinta kujongeka njengokugqibeleleyo kwaye ekugqibeleni uyikhuphela ngaphandle kwiifomathi zefayile.
Ukunceda kule nkqubo iphela Kukho abahleli abane befonti abakhoyo ezinje nge: FontLab Studio, Fontographer, Glyphs kunye neRobofont.
3 IGlyphs kunye neRobofont
Aba bahleli babini bane ibe sesona sixhobo sibalulekileyo kangangexesha elithile kule ndawo. Kwaye ngelixa sele kukho ukhetho olunomdla ngakumbi, basanikela konke ngenxa yokuba kukho abayili kunye neenkampani ezinomsebenzi wazo osekwe kuzo.
Unamandla ngokwaneleyo ukwenza iifonti ezikumgangatho ophezulu kwaye basebenza kuzo zombini i-OS X kunye neeWindows.
Usebenzisa i-FontLab unokuphinda ubambe yonke into kwakhona ukusuka kwiimpawu ezinjenge-OpenType ukuya kwi-TrueType. I-Fontlab sesona sixhobo sisetyenzisiweyo yoyilo lwefonti ngalo mzuzu. Kwaye, kwabaqalayo inokuba iyabhidisa ujongano olunomhla omncinci xa kuthelekiswa nabanye abahleli banamhlanje.
Oonobumba banokuba Isixhobo esifanelekileyo kumqali we-novice okanye umyili wedijithali. Ujongano lwayo luyonwabisa ngakumbi, kwaye izixhobo eziyimfuneko zibandakanyiwe nokubizwa kwemithombo kulula ukufikelela kuyo.
Kufuneka ikhankanywe ukuba nguFontrographer ayinalo ezinye zeempawu eziphambili ukuba unayo i-FontLab, inokwenzeka njani ukuba into yokuba uhlobo lwe-OpenType alukho.
IGlyphs kunye neRobofont
Iikhompyuter zedesktop ziye zaphumelela khupha typography kwaye uyenze ifikeleleke kuye wonke umntu. IiGlyphs kunye neRobofont zinokuqwalaselwa njengezixhobo zangoku zoyilo lohlobo.
Zombini izixhobo zine ujongano olutsala umdla kwaye sele bebaninzi abayili abathi ekuqaleni babemathidala ukubathatha ngokungathí sina. Zombini ziyavela kwaye sele zinabantu abazinikeleyo kubasebenzisi kunye nabaphuhlisi.
Iinguqulelo zamva nje kulula ukuzifunda kwaye Iyakwazi ukuvelisa iifonti ezikumgangatho ophezulu. Zombini zixhasa ifomathi yeUFO eyaziwayo.
IGlyphs inayo yajika inkqubo yokwenza ifonti ibe yinto enomdla ngonxibelelwano oluhlanganisiweyo lokuzoba nokuhlela. Inokuvelisa ngokuzenzekelayo amanqaku e-OpenType kunye nezikripthi ezintsonkothileyo ezinje ngeArabhu.
IiGlyphs zicwangcisiwe zisebenzisa iPython, kunye ukongeza izinto ezintsha kulula kakhulu. Umzekelo ocacileyo wento enokwenziwa kukuvula, ukuguqula nokuthumela ngaphandle ifonti ye-OTF kunye nokugcina yonke into ngaphandle kwesidingo solwazi lobuchwephesha malunga neefonti.
Kwaye, ngelixa iiGlyphs zingumhleli ochazwe kwangaphambili, iRoboFont ngumhleli oguquguqukayo ngakumbi obhalwe kwiPython. Ivumela yenza ngokusesikweni ujongano lwakho kunye nolwakhiwo ukuze abasebenzisi bazenzele ezabo izisombululo ngokweprojekthi abangene kuyo.
IiGlyphs kunye neRobofont azinakho konke ukusebenza kwezinto ezimbini zokuqala, kodwa ziguquka ngokukhawuleza, zinokukhubazeka ayisebenzi kwiWindows kwaye bayenza kuphela kwi-Mac.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ezona zixhobo zibalaseleyo zokwenza eyakho typography
Yintoni kunye nendlela yokusebenzisa iAdobe Kuler
Uyisebenzisa njani imo yeMask ekhawulezileyo kwiFotohop